लेख > भगवानको अनुग्रह > परमेश्वरले अनुग्रह प्रकट गर्नुहुन्छ
यो वास्तवमा शुद्ध अनुग्रह हो कि तपाईं बचत गर्नुभयो। तपाईले आफ्‍नो लागि केही गर्न सक्नुहुन्न, भगवानले तपाईलाई के भरोसा राख्नु बाहेक। तपाईं केहि गरेर यो योग्य हुनुहुन्न; किनकि उहाँ चाहनुहुन्न कि उहाँसामु कोहीले आफ्नै उपलब्धीलाई संकेत गरोस् (एफिसी २: –-G जीएन)।
यदि हामी इसाईहरूले अनुग्रह बुझ्न सिक्छौं भने कति राम्रो हुन्छ!
यस बुझाइले हामी आफैमा दबाब र तनाव हटाउँछ। यसले हामीलाई आराम र आनन्दित इसाई बनाउँदछ जुन बाहिरी हो, भित्री होइन। परमेश्वरको अनुग्रहको अर्थ हो: सबै कुरा ख्रिष्टले हाम्रो निम्ति के गर्नुभयो वा हाम्रो लागि के गर्दैन वा के गर्न सक्दैन भन्नेमा निर्भर गर्दछ। हामी मुक्तिको प्राप्ति गर्न सक्दैनौं। शुभ समाचार यो हो कि हामी यसलाई कुनै पनि हिसाबले किन्न सक्दैनौं किनकि ख्रिष्टले यस काम गरिसक्यो। हामीले गर्नुपर्ने कुरा भनेको ख्रीष्टले हाम्रो लागि के गर्नुभयो स्वीकार्नु र यसको लागि ठूलो आभार प्रकट गर्नु हो।
तर हामी पनि होशियार हुनुपर्छ! हामीले मानव स्वभावको लुक्ने व्यर्थलाई अहंकारपूर्वक सोच्न दिनुहुन्न। परमेश्वरको अनुग्रह हामीमा खास छैन। यसले हामीलाई इसाईहरू भन्दा राम्रो बनाउँदैन जुन अनुग्रहको प्रकृतिलाई पूर्णरूपले बुझ्न सकेको छैन, न त हामीलाई यसका बारे थाहा नभएका गैर-इसाईहरू भन्दा राम्रो बनाउँदछ। अनुग्रहको वास्तविक बुझाइले घमण्ड गर्न सक्तैन, बरु गहिरो श्रद्धा र ईश्वरको पूजा गर्न। विशेष गरी जब हामी यो महसुस गर्दछौं कि अनुग्रह आजका इसाईहरू मात्र होइन तर सबैका लागि खुला छ। यो सबैलाई लागू हुन्छ, यदि उनीहरूलाई यसको बारेमा थाहा छैन भने।
के हामी परमेश्वरको चासो र हाम्रो सम्पर्कमा आएका मानिसहरूलाई उनीहरूको हेरचाहको बारेमा कुरा गर्दैछौं? वा के हामी आफूलाई एक व्यक्तिको उपस्थिति, पृष्ठभूमि, शिक्षा वा जातिबाट विचलित हुन्छौं र न्यायको जालमा फस्छौं र आफूलाई कम महत्त्वपूर्ण र कम मूल्यवान् ठान्छौं? जसरी भगवानको अनुग्रह सबैको लागि खुला छ र सबैलाई असर गर्छ, त्यसरी नै हामी आफ्नो हृदय र दिमागलाई जीवनको बाटोमा भेट्ने सबैका लागि खुला राख्न चाहन्छौं।
अद्भुत बुबा, अनुग्रहको महान आशिष बुझ्न र हाम्रा सबै सम्बन्धहरूमा यसलाई पार गर्न हामीलाई मद्दत गर्नुहोस्। यो हामी जो मनपर्दछ साथ साथै परीक्षणको साथ हामीलाई चुनौती दिन्छन्। आमेन
किथ ह्याट्रिक द्वारा
परमेश्वरले के प्रकट गर्नुहुन्छ हामी सबैलाई असर गर्छ